mysansar – Page 63 – MySansar
जग्गामा कर लिने, गाडीमा चैँ छुट किन ?
Posted on June 25, 2012 June 25, 2012 by mysansar
-गौरीबहादुर कार्की- नेपाली जनताले २०।२५ हजार मूल्यको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा खरिद बिक्री गर्दा पनि मोलको आधारमा राजस्व बुझाउनु पर्दछ। अंशबण्डा गर्दा पनि मोलको आधारमा राजस्व बुझाउनु पर्दछ। अंशबण्डामा मोलको आधारमा २५ लाखसम्मको सम्पत्तिमा ०.२ प्रतिशत र सो भन्दा माथि २ करोडसम्म ०.३ प्रतिशत र २ करोड माथि ०.४ प्रतिशतका दरले राजस्व बुझाउनु पर्दछ। यस अनुसार… Continue reading
Posted on June 23, 2012 June 23, 2012 by mysansar
-शशांक लामा- जब म त्यस रात घर पुगेँ, मेरी श्रीमती खान पस्किन तरखर गर्दै थिइन्। तिनको हात समात्दै मैले भनें: तिमीसित एउटा कुरा गर्नुछ। तिनी बसिन् र चुपचाप खान थालिन्। मैले तिनको आँखामा उदासीपन महसुस गरें। अचानक मेरो वाक्य बन्द भयो। तर जे कुरा मैले धेरै दिनदेखि सोचिरहेको थिएँ, त्यो भन्न जरुरी थियो – म… Continue reading
Posted on June 22, 2012 June 22, 2012 by mysansar
-डील्लीराम भण्डारी “यात्री”- पुगनपुग एक दशकको खाडी बसाईको क्रममा हजारौं विदेशीसँग हेलमेल भयो। बिभिन्न देशका नागरिकहरुले नेपालीहरुलाई बास्तविक नाम वा ब्यक्तिगत नाम भन्दा पनि “बहादुर” भनेर नै बोलाउने गर्छन्। प्रसंग उठेको बेलामा केही ब्यक्तिसँग मैले “बहादुर”को बारेमा उनीहरुको बुझाइ वा धारणा बुझ्ने मौका मिल्यो। उनीहरुको तर्क बहादुर मुक माफि (दिमाग नभएको), माफिमालुम (काम गर्न नजान्ने)… Continue reading
Posted on June 21, 2012 June 21, 2012 by mysansar
-चर्चित ढुंगेल- कार्यक्रमका सभापति महोदय, (‘भारेभुरे’को सम्बोधन केलाई गरिरहनु?) सर्वप्रथम मैले यो कार्यक्रममा आइदिनाले तपाईँहरुको सिङ्गो कार्र्यक्रम र स्वयम् तपाईँहरु पनि धन्य हुनुभएको छ। मजस्तो ‘अन्तर्राष्ट्रे ब्यक्ति’को ब्यक्तित्वको पहिचान गरेर ‘घ्याम्पो’ रित्तिनेगरी ‘धोकेर’ आउँदा पनि ‘खुट्टामै ढोगेर’ ज्याईँलाई झैँ प्रथम बक्ता बनाइ लिनुभएकोमा मेरो ‘दिल गार्डन गार्डन’ भएको छ। आज यो उमेरसम्ममा म थोत्रोलाई कसैले… Continue reading
Posted on June 18, 2012 June 15, 2012 by mysansar
-दीप्स शाह- दिदी निकै च्याँट्ठिएर बोल्दै थिइन्। “आमैले केके गर्छिन् कतिको पैसा उरलधुरल गर्छिन् चियो गर्नु है! अलच्छिनLलाई के माया अर्काले कमाको पैसाको!” एसो भनिरहँदा दिदीको अनुहारमा देबी चढेको प्रतित हुन्थ्यो। निधारमा गाँठा परेका झैँ लाग्थे। ‘आमै’मलाई गाह्रो परेन उनले सासुआमाको कुरा गरेकी हुन् भन्नलाई। आफुले प्रस्टै अलच्छिनी भनेर नानीहरुलाई सिकाउने ती दिदी कति हदसम्म… Continue reading
Posted on June 16, 2012 June 15, 2012 by mysansar
-लेखनाथ काफ्ले- कति रोमाञ्चक थिए ती दिनहरु। बाउको आम्दानीमा कलेज पढ्यो, पढ्नु पनि के नै भन्नु र यसो बरालियो। कलेजमा केटाहरुसँग हल्लियो, हल्ला गर्‍यो। दिन कटायो, मैना कटायो, बस। न त स्पष्ट विचार थियो, न निर्दिष्ट लक्ष्य। पढ्नु पर्छ भन्ने थाहा थियो किनकी पढेर ठुलो मान्छे बनिन्छ भनेर हजारौ पटक सुनिएको थियो। तर एमए गरेका… Continue reading
Posted on June 12, 2012 June 12, 2012 by mysansar
-अनुप खनाल- अहिले नेपालबाट नर्वेमा कामको लागि ६ महिने भिसा पाएर आउनेको होडबाजी चलेको छ, धेरै साथीहरुले मलाई इमेल, फोनबाट सोधिरहनु हुन्छ। तर नेपालमा यहाँको वास्तविकतालाई धेरै नै बङ्ग्याइएको छ। विशेष गरी कन्सलट्यान्सीहरुले यसलाई बिजनेसको रुपमा लिएर धेरै बढाइचढाइ कुराहरु गरी राखेका छन्, त्यसैले मैले यहाँ देखेको वास्तविकतालाई लेख्न खोजेको हुँ। स्वदेशमा काम गरी केही… Continue reading